Ama-Franchise Athengiswayo Merseyside - Ama-Franchise Athengiswayo UK | I-Franchiseek
Ama-Franchise Athengiswayo Merseyside
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Ama-Franchise Athengiswayo Merseyside
Ama-Franchise afakiwe Athengiswayo Merseyside
Ama-Franchise Akamuva Athengiswayo Merseyside
Ama-Franchise ayathengiswa eMerseyside
I-Franchising iyindlela ethandwa kakhulu kunoma ngubani ukuqala ibhizinisi lakhe eMerseyside. Ngakho-ke namuhla sizokwabelana ngezibalo ezithile mayelana nokuqala ibhizinisi lakho ngokutshala imali ethubeni le-franchise. Sithemba ukuthi lezi zibalo zingakusiza uqonde uhlobo lwamakhasimende aseMerseyside. Futhi ukukhula komnotho iMerseyside kubonile eminyakeni eyedlule embusweni obumbene.
Statistics around Esikhawini
Manje sizobhala ezinye izibalo ezingezansi kweMerseyside ukukunikeza umbono wendawo nendawo yamakhasimende ongayithola lapho uthenga ithuba lokuthola ilungelo lokuthenga elizinze eMerseyside.
Ku-2018, bekukhona abahlali be-1.4M ku Merseyside County eneminyaka yobudala engama-40.6.
Inani labantu lalingabahlali abangu-2.2k ngekhilomitha lesikwele ngalinye.
Isibalo sabantu sikhule ngo-4.1% kusukela ngo-2002 kanti isilinganiso seminyaka yabantu sinyuke ngeminyaka engu-1.7 ngesikhathi esifanayo.
I-franchising isiza kanjani umnotho?
Manje sizobhala ezinye izibalo ezingezansi ezaqoqelwa i-UK yonke eminyakeni eyedlule. Noma lezi kungezona izibalo eziqoqwe eMerseyside zisakhombisa ukuthi iyiphi indima ebalulekile edlalwa minyaka yonke emnothweni wase-UK.
I-Franchising inikeza imisebenzi engaphezu kuka-700,000 e-UK.
I-Franchising iyodwa e-UK ifaka isandla kumabhiliyoni ayi- $ 17 billion emnothweni wase-UK.
Futhi i-franchising inyusa izigidi zezinhlangano zayo zosizo ezikhethiwe minyaka yonke.
Zikhombisani lezi zibalo zokwenza imali e-UK?
Lezi zibalo zikhombisa noma ngabe ukuthengiselana ngemali kuhle kunoma ngubani ofuna ukuqhuba ibhizinisi kepha ukhathazekile uma emisha. I-Franchising ivumela labo bantu ukuthi bafeze amaphupho abo futhi baqhube ibhizinisi labo futhi bathole usizo ku-franchisor igxathu negxathu. Futhi ukwenza i-franchising kusiza kakhulu umnotho njengoba ubona ngokufunda izibalo ezabiwe ngenhla. Ngakho-ke ngingasho ngithi ukwenza i-franchising e-UK kungukuwina, ukunqoba.